izingubo imfashini - kuyindlela enhle yokukhuluma. Abesifazane ulisebenzise njalo futhi ephumelelayo, ukwazi ukuthi kubaluleke kangakanani self-ingubo evamile futhi stylish, kodwa ngenkathi sigcina ubuntu babo.
Abesilisa in fashion okubalulekile olandelanayo ngaphezulu nesingakhangi, okuyinto kubangelwe indlela yabo yokuphila, imikhakha yomsebenzi, ngezici zobuntu kanye namasiko. Akubuzwa, fashion madoda, kusukela ngekhulu XIX, hhayi ngezitayela ezihlukahlukene ezahlukene nezimfashini. Traditional ibhizinisi izingubo, okuyinto amabili eminyaka uye washintsha ezincane, uhlala element central wezigqoko besilisa.
Maye, kodwa nenyumfomu yakudala, esiqinile, kodwa nenhle, kunothile timphawu egqamile futhi ihehe, baba nomlando. Izinkumbulo balo isitayela netakhiwo yesimanje izingubo besilisa ikhabethe zesifazane. Esinye isici blazer zabesilisa (futhi abesifazane), elihlanganisa isitayela zakudala nge kuthintwa of imvunulo yezempi, kanye izakhi akhululayo ezemidlalo isitayela. Ngenxa yalokhu, kungenziwa igqoke ngaphandle kokuthi ngendaba yesiko kanye imithetho eqinile.
Traditional club blazer ibhantshi noma (kokubili kwabesifazane nabesilisa) uboya ithungwe monochromatic, noma nemithende, isibanda, izicubu ezincane cell. Izici elihluke ephikisanayo, ngokuvamile metal izinkinobho zayo emashalofini futhi imikhono, webele emaphaketheni, ehlotshiswe amaphosta (ekuqaleni Blazers ukugqokwa amalungu amakilabhu ahlukahlukene ahlukile). Ngokuvamile, esikhundleni esisodwa Slots abaklami basebenzisa zombili. Club jackets kwabesilisa nabesifazane lokhu isitayela, nezinguquko ezincane ingatholakala amaqoqo yakamuva Abaklami eziningi ehamba phambili emhlabeni.
Nokho, lokhu uhlobo izingubo, ikakhulukazi kwekilasi madoda, futhi kuya kuba yelinyenti ngokuya simele ukuxuba okukhulu classical nge nenkululeko yokukhuluma kanye nesitayela. Blazer igqoke nge jeans kanye t-shirt, ukugqoka ngayo mncane pullover noma polo amahembe. Nge ubukhazikhazi ekhethekile babukeka ophakanyiswe izindololwane noma zihambisana imikhono nge Ngokuphambene ulwelwesi, okuyinto ifana cuff esimise okwembali. Esikhundleni isibopho ngokwendabuko ngempela ezifanele isikhafu eside yayiboshwa izungeze intamo, ne kube semikhawulweni Azazeli. Enye mkhuba ezithakazelisayo kwavela eminyakeni yamuva, futhi ihlobene uthando izingubo multi-egqinsiwe. Ngo lanamuhla imfashini isudi blazer Kunconywa ukuba igqoke phezu ihembe noma pullover ezigugile ngaphandle, futhi bangase Ukubheka kancane lisuke ngaphansi kwakhe, lapho uletha ku zomuntu isudi isici wamaphaphu sifo. Nokho, lesi sifo kufanele ngokuqinile ayicabangile.
Classic club jacket - luhlaza. izitayela fashion kwakamuva aye akhula ngendlela umbala waso ububanzi futhi manje kubonakala amaqoqo nabaqambi onobuhle oluhlaza, amnyama obomvu, sandy ophuzi, abamhlophe nabansundu.
Ekugcineni, blazer langempela ezigugile esikhundleni Ngo Isizini outerwear. Ithungwe kusukela uvolo zemvelo efudumele, ezifana alpaca, ngemibala ethulile ekwindla kanye amahlamvu esewile, ezigugile phezu pullover wathungela noma sangaphansi, ephelele nge isikhafu obukhulu efudumele, abente isethi enhle ne dark uvolo ibhulukwe abesilisa isiketi eside okuxekethile kwabesifazane.
Blazer we ukuthenga izingubo zokugqoka, ekhombisa okuqondene iqembu avaliwe elite bathuthela le ezweni catwalks fashion, unyaka ngamunye kuba jikelele ngaphezulu, futhi ngenxa yalokho, izinto ezidingekayo kule ikhabethe akuyona yesimanje, amadoda nemfashini, kodwa futhi abesifazane kuphela, othanda ukuba ulinge nokumangala.
Cocktail Black Dress: incazelo, tinkhulumo, izitayela, uhlanganise kanye nokubuyekeza
Izicathulo ze-platform zesifazane
Apple cider - isiphuzo esimnandi
Ukuhlola isibindi: uhlu izindlela
Njengoba esifubeni zaprivatit e Minecraft nendlela ukuyenza sobala
Keith Gray: Managing
Roy Hodgson: kusukela isidlali elingaziwa ukuze umqeqeshi ehloniphekile
Amaholide ENyakatho Goa naseNingizimu. Uyini umehluko eliyisisekelo?
Holiday Village "Amanzi Ipaki Kum-Kul ': incazelo kanye nokubuyekeza zezivakashi
Indlela ukufaka kanye nendlela ukusebenzisa umdlalo phezu PS3?
Uhlolojikelele isithuthuthu Suzuki Gsx-R 750
Gun Foam: izici ukukhetha